Wiil xiddig ka noqday Instagram timihiisa dheer darteed iyo hooyadiis oo arrintaa culeys ka heysto
Mogadishu - 12:55:21
Monday January 06, 2020 - 22:20:43 in Wararka by Super Admin
Farouk James waa wiil yar oo 7 sano jir ah oo ku nool magaallada London, kaa soo xiddig ka noqday waayadaan dambe barta bulshadu ku kulanto ee Instagram ee dhanka Internet-ka maadaama uu leeyahay timo dheer oo ka duwan carruurta da’diisa ah.
Hooyadiis oo wiilkeeda timihiisa ku bixisa waqti badan, si wanaagsanna u daryeesha ayaa waxaa wiilkeedu uu dhanka xayaysiinta u qaabilsan yahay shirkadaha waaweyn sida Gucci iyo Fendi.
Bogga wiilku ku leeyahay Instagram (@FaroukJames) oo ay hooyadiis maamusho ayaa waxa uu leeyahay dad ka badan 260,000 oo followers ah.
Laakiin canuggan yar hooyadiis ayaa xoogaa culeys ah ka haystaa dhanka bulshada ay la nooshahay iyo weliba dadka ka fal celinaya sawirrada iyo muuqaallada wiilkeeda ee ay Instagram soo dhigto, waxaana dad badan ay u sheegayaan in ay ka faa’iideysanayso canuggeeda oo ay siyaabo ganacsi u adeegsanayso.
Kuwo kale ayaa leh "Wiilka timaha ka jar, gabadh ma ahane".
Waxaa kale oo jirta in iskuullada sare ee Ingiriiska qaarkood in aysan qaadan wiilasha timaha dheer, taasoo caqabad kale ah, iyadoo sidoo kale in uu wiilku dhibaato kala kulmi karo ardayda uu wax la baranayo maadaama uu ka timo duwan yahay.